Otu esi agbanwe ụzọ nbudata nke ngwa SnapTube? - LifeBytes | LifeBytes
Kedu ka esi agbanwe ụzọ nbudata nke ngwa SnapTube?
Ihe nbudata vidiyo SnapTube bụ ihe nbudata vidiyo kacha mma maka ngwaọrụ gam akporo gị ugbu a. Ọ na -enye ohere nbudata sitere na weebụsaịtị dị iche iche dị ka YouTube, MetaCafe, DailyMotion yana Facebook na Instagram. Agbanyeghị na ọ bụ ngwa maka gam akporo, ọ naghị adị na ụlọ ahịa Google Play. Ihe kpatara ya bụ na Google na -egbochi nbudata vidiyo YouTube niile. Mana enwere ụzọ ọzọ dị.
1 Atụmatụ ngwa SnapTube Downloader:
2 Kedu otu m ga -esi agbanwe ọnọdụ nbudata na ngwa SnapTube?
3 Usoro iji gbanwee ụzọ nbudata:
4 Kedu ka SnapTube si arụ ọrụ?
Atụmatụ ngwa SnapTube Downloader:
budata Snaptube APK, ngwa ọrụ dị ịtụnanya nke ngwa ahụ na -enye gị ohere ijikwa onye na -ebudata ya nke ọma.
SnapTube na -abịa na nhọrọ ọnọdụ dị iche iche iji mee ka nbudata vidiyo dị ngwa.
SnapTube na -enye injin ọchụchọ dị ike yana akara mkpado mkpado omenala.
Na mgbakwunye, ọ na -enye vidiyo nbudata nwere ogo 60FPS yana mkpebi nke 4K.
Iji nye gị nbudata ngwa ngwa, ngwa ahụ na -eji ọtụtụ njikọ.
Ị ga -ahụ webụsaịtị niile n'otu ebe.
Enweghị mgbasa ozi ma ọ bụ mmapụta.
Ị nwere ike ibudata vidiyo ezoro ezo na YouTube.
Ọ dị mfe, ọ ga -ekwe omume ịtụgharị faịlụ vidiyo ka ọ bụrụ ọdịyo.
Ọrụ ibe edokọbara dịkwa. Ị nwekwara ike ịhazi ọtụtụ nbudata n'otu oge.
Kedu otu m ga -esi agbanwe ọnọdụ nbudata na ngwa SnapTube?
A na -echekwa vidiyo YouTube niile ozugbo na nchekwa nke ime. Iji nweta ya, ị nwere ike soro njikọ njikọ nchekwa n'ime> SnapTube> Vidiyo. Ọ bụrụ na enweghị ohere zuru ezu mgbe ebudatara ọtụtụ vidiyo, ọ nwere ike mebie ọrụ kwesịrị ekwesị nke ngwa ndị ọzọ. Ngwaọrụ gị ga -amalite ịrụ ọrụ nwayọ ka oge na -aga. Iji zere ọnọdụ a, ịnwere ike ịgbanwe ụzọ nbudata vidiyo ndị ahụ.
Usoro iji gbanwee ụzọ nbudata:
Mepee vidiyo vidiyo SnapTube.
Enwere akara gia na akuku aka nri elu nke ihuenyo ahụ. Pịa ya ka imepe ntọala.
Ugbu a, họrọ nhọrọ "Budata ụzọ".
Họrọ MicroSD iji chekwaa vidiyo na ngwaọrụ mpụga site ugbu a gaa n'ihu.
Ị nwekwara ike ịmepụta folda ọzọ. N'elu aka nri elu, enwere akara ngosi nchekwa, pịa ya.
Ọzọkwa, nye ya aha dị ka SnapTube wee mepee ya site na ịpị ya otu ugboro.
Ị ga -akwado ya site na ịpị "Họrọ folda a". Ị nwekwara ike ịmepụta obere folda site na ịpị nhọrọ "Mepụta folda ọhụrụ".
Ngwa ga -ajụ gị ọzọ maka nkwenye, pịa «Họrọ» iji gosi ya.
Ugbu a agbanweela ọnọdụ nbudata na nchekwa nke mpụga. N'ikpeazụ, ịnwere ike ibudata vidiyo ahụ na -echegbughị onwe gị gbasara ohere nchekwa.
Ị nwere ike kpọọ vidiyo site na osisi ma ọ bụ jiri aka gị soro onye njikwa faili> Kaadị SD> SnapTube. Ọ gwụla.
Kedu ka SnapTube si arụ ọrụ?
Dị ka aha ngwa na -agwa anyị na ebudatara ya n'otu ntabi anya. Ọ na -arụ ọrụ tumadi site na igwe nchọta dị iche iche.
Nchọta ngalaba: Nchọpụta otu na -enyere gị aka inyocha ọdịnaya ịchọrọ n'ihi na ị nwere ike jikọta ya na nkeji iri dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, vidiyo na -atọ ọchị, egwu, eserese, wdg. Ka ịgbanwee site n'otu otu gaa n'ọzọ, jiri swipe ihuenyo site n'aka ekpe gaa n'aka nri.
Nchọpụta isiokwu: Site na nyocha isiokwu, ị nwekwara ike nweta vidiyo ndị ịchọrọ. Mgbe ịchọtara ihe ịchọrọ, ị nwere ike budata ma chekwaa ya maka nlele ma emechaa.
Kụrụ Trending: Ị nwekwara ike ịhụ ihe na -ewu ewu na eserese vidiyo na eserese egwu na ọtụtụ ndị ọzọ na nke a.
Anyị nwekwara ike kwuo na SnapTube APP dị mfe iji yana onye na -ebudata ngwa ngwa. Iji nweta mmetụta HD, ịnwere ike iji ụdị adịchaghị mma maka naanị $ 1.99. Ma ndị asọmpi ya TubeMate, Vidmate ma ọ bụ Videoder (
budata videoder ebe a) nwere otu arụ ọrụ, mana mgbanwe a dị na nbudata nbudata ya nwere nhọrọ dị iche iche. Anyị kwesịrị ikwu na ị nwere ike ị gaghị enweta ngwa a na ụlọ ahịa Google Play n'ihi amụma nwebisiinka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Kedu ka esi agbanwe ụzọ nbudata nke ngwa SnapTube?
Jiri ọnụego efu nke Credomatic Costa Rica
Nweta kaadị Bac Costa Rica Credomatic